Maskaxdu si joogto ah ayey horumar u samaysaa oo unugyada neerfayaasha ku xeeran waxaa ku dahaaran baruur taas oo samaysa inay fariimaha neerfayaashu si dhakhso ah loo kala diro. Si tartiib ah ayey u bilaabmaan, kadibna si degdeg ah ayey u socdaan marka lagaaro wakhtigii uu ilmuhu dhalan lahaa. Akfiifiteetka maskaxdu waa mid aan joogto ahayn, laakiin waa hadda marka ay maskaxdu bilaabayso wareega inta uu ilmuhu ku jiro hurdada riyada ah ((REM-Rapid Eye Movement). Hurdada riyada ayaa ilmaha muhiim u ah awooda dareenka maskaxda si uu ilmuhu u yeesho horumar iyo hurdada qoto dheer oo muhiim u ah kartida waxbarashada. Ilmuhu wuu la socdaa dhawaaqa hoose waanu kala saarikaraa codka raga iyo codka dumarka. Dhaqdhaqaaqa indhaha ilmuhu weli may kobcin oo ilmuhu ma xakamaynkaro gebi ahaanba iftiinka soo geleya xuubka isha. Ilmuhu wuu kala saarikaraa dhadhanka macaan iyo dhadhanka dhanaan.
Qaabka dhaqdhaqaaqa ilmuhu waa mid weli weyn oo lagu wareerayo oo socda waana mid had iyo jeer u dhaca qaabab soo noqnoqda taas oo ay ilmaha laftiisa ku adag tahay inuu xadido. Wuxuu ilmuhu isku dayaa inuu isagu ismaslaxo isagoo gacanta dhigaya afka agtiisa, inuu nuugo mujuruc ama inuu wax qabto markaas kadib wuxuu ilmuhu bilaabaa inuu wax ku qabto faraha gacmaha iyo kuwa lugaha 新生儿照护
Maadaama aanay sambabadu kobcin wuxuu ilmuhu u baahan yahay nooc ka mid ah taageero in laga caawiyo sidii uu si fiican oo qoto-dheer ugu neefsan lahaa. Carruurta inta badan waxa neeftooda lagu hagaajiyaa iyadoo la kaashanayo Cpap (Continuous Positive Airway Pressure). Wuxuu ilmuhu yeelan karaa isu dheelitirn la'aan garaaca wadnaha iyo neefsashada.
Iyadoo ay ku xiran tahay koriinka ilmaha (usbuuca uu ilmuhu dhashay) waxa dhicikarta in ilmaha laga beddelo sariirta dhalada ka samaysan oo loo beddelo sariir kulul. Sarriirta kululi waxay leedahay joodari biyo diiran iyo qalab ka ilaalinaya iftiinka sare. Marka ilmaha lagu daryeelayo sariirta kulul wuxuu qofku gashanayaa funaanad laga qaadanayo/amaahanayo isbitaalka.
La qaado wakhti aad u badan ilmahaaga sida ugu macquulsan kana qayb qaado daryeelka daaweynta si aad u heshid fursad aad ilmahaaga isku barataan. Carruurta da'dan oo kale ahi aad ayey ugu nugul yihiin saamaynaha dhammaantood. Ilaa xad lama falgalaan waxyaabaha ku xeeran, laakiin waxa ka caawiya waa inuu jewegu deggan yahay oo uu iskudubadhacsan yahay iyo in wax walba si tartiib tartiib ah loo sameeyo iyadoo nasashooyin la dhexgelinayo oo lagu daro wax uu ilmuhu jecel yahay ama wax saamayn ku yeelankara. Sidaa daraadeed ku qabo ilmahaaga gacmo jilicsan, diiran oo aan dhaqdhaqaaayn. Ka caawi ilmaha inuu jirku u yaalo boos fiican gacmaha iyo luguhuna ay si jicilsan oo dabacsan u yaalaan. Ilmuhu wakhtigii uu caloosha ku jiray wuxuu lahaa xuduudo cad oo dareemayey ama garanayey. Kula hadal cod dabacsan, wuu garanaya codkaaga ilmuhu. Ilmuhu codkaaga wuu garanayaa. Marka gacanta indhaha ilmaha kor laga saaro oo iftiinka laga qariyo waxay ilmaha ka caawinaysaa inuu kor wax u fiirinkaro. U keen qayb yar oo maro ah oo ay urtaadu ka urayso oo dhig meel wejigiisa u dhow.
Sida ugu dhakhsaha badan marka xaalada ilmuhu ay xasiloonaato ayaa ilmaha lagu daryeeyalayaa maqaar ilaa maqaar adiga oo xabbadka/laabta ku qabanaya, maadaama ay saamayn badan ku leedahay horumarka ilmaha iyo wanaagiisaba. Tani waxay ka caawinkartaa inuu ilmuhu wax badan iska soo taro dhinaca neefashada, garaaca wadnaha, keerkulka jirka iyo dheefshiidka cuntada. Waxay kaloo ku sii daynaysaa "hormoono wanaagsan" adiga iyo ilmahaagaba. Shaqaalaha ayaa kaa caawinaya inaad hesho boos wanaagsan aad ilmaha dhigto si aad idinku isugu heshaan wakhti fiican oo aad si wadajira ugu raaxaysataan.
Bilow in aad caanaha naasaha ku jira aad soo saarto. Dhibcaha caanaha ee naasaha ee ugu horeeya ayaa ah qaar nafaqo badan leh (kolostrum) markaa si toos ah ayaa ilmaha afkiisa loogu qabanaya markaad shaqaalaha ku heshiisaan kadib. Marka ay caanuhu caadi u soo baxaan fadlan markaa caadayso in aad caanaha in yaryar u listo si aad u siiso marka uu ilmuhu soo kaco.